ဆရာတော် ဦးဇ၀န၏ အွန်လိုင်း မေးဖြေများ	Posted on July 25, 2009	by mettayate အရှင်ဇ၀နအား ကျမ မေးကြားထားသော မေးခွန်းများကို ဆရာတော်ဖြေကြားထားသည်များကို ဓမ္မအလှူဖြင့် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာတော့်ကို မေးချင်တဲ့မေးခွန်းများ၊ သိချင်တဲ့ ဓမ္မမေးခွန်းများရှိခဲ့သော် www.mettashin.org မှာ admin@mettashin.org, nanhtike@mettashin.org , nanhtikewin@gmail.com ကို အီးမေလ် ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဆရာတော် မအားလပ်တဲ့ကြားထဲက မေးခွန်းများကို တစ်လ တစ်ခါ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ (ကျမတင်ထားခဲ့ပြီးသော် posts များတွင် အမှားများပါခဲ့သော် ကျမ၏အားနည်းချက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မေတ္တာရှေ့ထားပြီး အမှားကို အမှန်ပြင်နိုင်ရန် အချိန်မရွေး နေရာမရွေး သွန်သင်ဆုံးမနိုင်ပါတယ်လို့ ဒီနေရာကတင် မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်သည်များကိုလည်း အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်။)
မေးခွန်း(၁) ရုပ်နာမ်ကို ငါးပုံပုံရင် ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီး ထိုခန္ဓာငါးပါး၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့် ထိုခန္ဓာငါးပါး၏ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းကိုလည်း သိရသည့်အပြင် နောက်ထပ် နာမရူပပရိစ္ဆေဒဥာဏ်နှင့် ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဥာဏ်ကိုပါသိရင် စူဠသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာတော် ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤသို့ဖြစ်လျှင် ရုပ်နာမ်ကို ရှု့ပွားသူများ၊ ရုပ်နာမ်ကို တစ်ဆယ့်နှစ်ပုံပုံပြီး အာယတနကို ရှု့ပွားသူများ၊ ရုပ်နာမ်ကို လေးပုံပုံပြီး သစ္စာလေးပါးကို ရှု့ပွားသူများ၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြင့် ရှု့ပွားသူများသည်လည်း လိုအပ်ပါသလား။ ထိုသို့လိုအပ်လျှင် မည်သို့သိဖို့ လိုအပ်ပါသနည်း။ အဖြေ(၁) လိုအပ်ပါသည်။ ရုပ်နာမ်၊ ခန္ဓာ၊ အာယတဓန၊ ဓါတ်၊ ပဋိစသမုပ္ပါဒ်၊ သစ္စာတို့ကို အကျယ်သိလိုလျှင် ပခုက္ကူဝိပဿနာတရားခွေ တစ်နှစ်စာကို နာယူပါ။ ဆရာတော်လေ့လာခဲ့သော ၀ိပဿနာ ကျင့်စဉ်(၁၁)နည်းတွင် ဆရာကြီးဦးကြင်ရွှေ ဟောကြားသော ပခုက္ကူဝိပဿနာ တရားခွေများတွင်သာ ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများကို အကျယ်ဟောထားကြောင်းတွေ့ရသည်။
မေးခွန်း(၂) အရှင်ဘုရား.. တနင်္သာရီတိုင်း၊ မြိတ်မြို့နယ်၊ ကျောက်ဖြူတောင်ရွာ၊ သစ်ညီနောင် ဓမ္မရိပ်သာကျောင်း၌ သစ္စာလေးပါး ဟောကြားချက်မှာ အနာဂါမ်နှင့် ရဟန္တာတို့၏ အမေးအဖြေများ၊ ဆရာတော်၏ ဘယ်စာအုပ်မှာ ရေးထားပါသလဲဘုရား၊ အဲ့ဒီ့ တရားထဲမှာ တပည့်တော်မ သိချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ် ဘုရား။ ` ရဟန္တာသည် ကိုယ့်အသက်ကို မငဲ့ဘဲ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အသက်အတွက် ကိုယ့်အသက်ကို စတေးခံနိုင်တယ်လို့ ဥပမာအနေဖြင့် ဦးသုခရိုက်သော ရုပ်ရှင်ကားမှာ ရဟန္တာသည် ကြိုးကြာအသက်ကို ငဲ့ကွက်သည့်အတွက် ကြိုးကြာက ပတ္တမြား မျိုလိုက်တာကို ကျောက်သွေးသမားကို မပြောဘဲ ထိုကျောက်သွေးသမား၏ ရိုက်နှက်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ တပည့်တော်မ သိချင်သည်မှာ ကြိုးကြာငှက် အသက်ကို ငဲ့ကွက်ခဲ့ပေမယ့် ကျောက်သွေားသမားဟာ ငရဲကြီးပြီး အ၀ီစိထိကျမယ့် အချက်ကို ထည့်မတွက်ဘူးလားလို့ သိချင်ပါတယ်ဘုရား။
လူသားတို့သည် ရသတဏှာနောက်လိုက်ပြီး ကျွဲ နွားများကို သတ်ဖြတ်စားသောက်သော အခါမှစ၍ နတ်များက မစောင့်ရှောက်ကြတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် လေဘေး၊ ရေဘေးများကျရောက်ခြင်း၊ အနာရောဂါဖြစ်ခြင်း စသောဘေးများ ကျရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသုတ်၌ ဆက်လက် ဟောကြားထားသည်။ (မှတ်ချက်) အသားစားခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကို ကျွန်ုပ်ရေးသားသော မေတ္တာအစွမ်း အံ့မခန်းစာအုပ်တွေင် ဖတ်ရှုနိုင် ပါသည်။
ဓနုဖြူသို့ ရောက်သောအခါ ဒကာတစ်ယောက်က ယခုလို လာလျှောက်သည်။ ဆရာတော်က နွားသား မစားရေးဘဲ ဟောနေတော့ ကျန်တဲ့အသားတွေတော့ ကြိုက်သလို သတ်ဖြတ်စားလို့ ဟောသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆရာတော်ရဲ့ မေတ္တာဟာ နွားတစ်မျိုးအပေါ်မှာပဲ ထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
မေးခွန်း(၄) အဓိဋ္ဌာန်၏ အဓိကအကြောင်းကို သိချင်ပါတယ်။ တရားတော်တွေထဲမှာ အဓိဋ္ဌာန်အကြောင်း အတော်များများ ပါပါတယ်။ တပည့်တော်မ တွေ့ဖူးတာကတော့ တစ်ခုခု လိုချင်ရင် (ဒါမှမဟုတ်) အန္တရယ်ကင်းအောင် ဂုဏ်တော်တွေကို ပုတီးဘယ်နှစ်ပါတ်ရအောင် စိပ်မယ်စသည်ဖြင့် အဓိဋ္ဌာန်တယ်။ ဒါတွေဟာ ဘုရားဟောနှင့် ညီပါသလား။ ယခုလို မေးရခြင်းမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်လို့ပါ။ ယခုခေတ်လူတွေ တပည့်တော်မ အပါအ၀င် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ဗြဟ္မဏ အယူဝါဒတွေ ရောဝင်နေတတ်လို့ပါ ဘုရား။ အဖြေ(၄) အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီဟူသည် ပါရမီဆယ်ပါးတွင် ပါဝင်သော ပါရမီတစ်ပါးပင်ဖြစ်သည်။ မြင့်မြတ်သူတို့၏ အလုပ်ကို ပါရမီဟုခေါ်သည်။ ပေးကမ်းခြင်း ဒါနကို လူတိုင်းပြုလုပ်ကြသည်။ သို့သော် ဒါနပြုတိုင်း ပါရမီအမည်ရသည် မဟုတ်။ မျှော်လင့်ချက် တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ပေးကမ်းလျှင် ဒါနတော့အမည်ရသည်။ ပါရမီအမည်ကား မရ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ သူ၏ဒါနတွင် မြင့်မြတ်မှု မပါသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
စပြီး ပုတီးစိပ်စဉ်က ပါရမီမထိုက်တော့ရာ ဘယ်နှစ်ပတ်ရအောင် စိပ်မည်စသည်ဖြင့် အဓိဋ္ဌာန်ခြင်းသည်လည်း ပါရမီမထိုက်သော အဓိဋ္ဌာန် မဖြစ်နိုင်တော့ချေ။ ပါရမီဆယ်ပါး ဖြည့်ဆည်းပုံ အကျယ်ကို ဆရာတော်ရေးသားသော အရှုံးမရှိသော ဒဿန အမည်ရှိသော စာအုပ်တွင်ဖတ်ပါ။ ယခုပါရမီဆယ်ပါးကို အကျဉ်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ၁။ ဒါနပါရမီ = စွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း။
မေးခွန်း(၆) ဘုရားဖြစ်ဖို့၊ ဘုရား၏ လက်ယာရံ၊ လက်ဝဲရံ စသည်ဖြင့် ဖြစ်ချင်ရင် ပါရမီဘယ်နှစ်ပါးနှင့် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဖြည့်ကျင့်ရမည်ဟု ဟောကြားထားပါတယ်ဘုရား၊ ဒီလိုမျိုးဖြည့်မှ ဘုရားဖြစ်မယ်၊ လက်ယာရံ၊ လက်ဝဲရံဖြစ်မယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိပါသလဲဘုရား။ အဖြေ(၆) အပါဒါန်ပါဠိတော်၊ ထေရဂါထာ၊ ထေရီဂါထာ စသော သာဓကယုတ္တိ ဟောကြားချက်များကိုကြည့်၍ သိရသည်။ မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆို လက်ခံနိုင်သော သဘာဝယုတ္တိကို ပြအံ့။ သီတဂူကို မြန်မာကသာမက ကမ္ဘာကပါ သိရခြင်းမှာ ဒါနပါရမီကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှ သောင်းနှင့်ချီသော ရဟန်းများ၊ သီလရှင်များအတွက် ရေအလှူကိုပေးနေသည်မှာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပေ။ ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှ ရေများကို စက်များဖြင့် စုပ်တင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ရဟန်းသီလရှင် အားလုံးအတွက် သီတဂူဆေးရုံကြီးကို ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းပေးထားသေးသည်။ ထိုမျှမက သီတဂူကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးကို တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ဆရာတော်များကို မွေးထုတ်ပေးလျှက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ မြို့နယ်ဆေးရုံများသို့ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆေးများကို လှူဒါန်းနေသည်မှာ မြို့နယ်ဆေးရုံပေါင်း နှစ်ဆယ်နီးပါးမျှ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဆေးရုံတစ်ရုံသို့ လှူဒါန်းသောပစ္စည်းများကို မြနမာငွေဖြင့်တွက်လျှင် သိန်းနှစ်ရာကျပ် ၀န်းကျင်တွင်ရှိသည်။ ရေအလှူ၊ ဆေးအလှူ၊ ပညာဒါန အလှူသုံးမျိုးအတွက် တစ်ရက်လျှင် အနည်းဆုံး ဆယ်သိန်းဝန်းကျင်ခန့် ကုန်ကျသည်ဟု သိရသည်။ တစ်လလျှင် သိန်းပေါင်း သုံးရာကျပ်ရမှသာ လုပ်ငန်းကြီးသုံးခု လည်ပတ်နိုင်မည် ဖြစ်သောကြာင့် ဆရာတော်ကြီးသည် မနားမနေ တရားဟော ထွက်နေတော်မူသည်။ ဆရာတော်ကြီးအတွက် အိပ်ချိန်မှတစ်ပါး သီးသန့် နားချိန်ဟူ၍ မရှိပေ။ နာဂစ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြသော ဧရာဝတီတိုင်းမှ ရေဘေး၊ လေဘေး ဒုက္ခသည်များကို ဆရာတော်ကြီးဦးဆောင်ပြီး လှူဒါန်းသည်မှာ သိန်းပေါင်းခုနှစ်သောင်းခန့်ရှိသည်။ မေးခွန်းဖြေသူ ဆရာတော်ကား သိန်းတစ်ထောင်ခန့်ကိုပင် မနည်းရှာပြီး လှူခဲ့ရသည်။
This entry was posted in အတွေးအမြင်များ and tagged အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်)ရွှေပြည်သာ. Bookmark the permalink.	← အခြေခံအကျဆုံးစာအုပ်